एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच ६ बुँदे सहमति,पार्टी एकता गर्ने औपचारिक घोषणा – HamroSamrachana
एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच ६ बुँदे सहमति,पार्टी एकता गर्ने औपचारिक घोषणा
हाम्रो संरचना । १७ आश्विन २०७४, मंगलवार १९:०८
१७ असोज, नेपालगञ्ज/ एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सहमति औपचारिक घोषणा भएको छ। ६ बुँदे सहमति पत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचन्ड र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मंगलबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने सहमति नेताहरुबीच भएको छ। यस संयोजन समितिमा एमालेबाट ४ नेता, माओवादीबाट ३ नेता र नयाँ शक्तिबाट एक नेता सदस्य रहनुभएको छ । त्यस्तै दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। प्रदेश र संघको चुनावपछि विधिवत रुपमा पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने घोषणा राष्ट्रिय सभागृहमा मंगलबार सांझ औपचारिक घोषणा भएको हो। चुनावी तालमेलको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँशक्ति नेपाल बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए ।
नयाँशक्ति नेपाल, एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल र भविष्यमा पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा भएको छ । दुई ठूला पार्टीको गठबन्धनमा नयाँशक्ति नेपाल पनि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सहभागी भएको छ । एउटै पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता घोषणा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली,नेकपा माओबादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड, र नयां शक्ति केन्द्रका बाबुराम भटटराईले सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
पार्टी एकता कार्यक्रममा देश र जनताका निम्ती नेपालका कम्यूनिष्ट पार्टीहरु आवश्यक्ता बमोजिम एकिकरण अभियानमा उत्साहपूर्वक लाग्न घोषणा समेत गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो, तपाईंको निर्वाचन क्षेत्र कुन ? थाहा पाउनुहोस सूचिसहित